OSX Bug: Dzosera mufananidzo kune gumi nematanhatu maTerabyte? | Martech Zone
Wednesday, April 23, 2008 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
Iyi yakanaka inotonhorera (uye isinganetsi) bug yandamhanyira nhasi. Ini ndaida kudzora mufananidzo ndichishandisa preview kubva ku140px yakafara kusvika pa100px yakafara. Kufanoona hakuzombo chengetedze ini pandakadzvanya OK. Ini ndinofunga ndakazvifunga - tarisa iyo Kukura Kukura.
Tags: makirisimasinguva yezororojoincubemangoappsmindjet kubatanidzaoogwavemagariro mabhukumaki
Plaxo Desktop Notifier - Mhinduro kubva kunetiweki yako
Apr 23, 2008 pa 2: 00 PM
Apr 23, 2008 pa 2: 22 PM
yea.. i wonder if this is the same thing as chidimbu ichi or chidimbu ichi that apple still hasn’t fixed in 10.5 🙂
Apr 24, 2008 pa 7: 54 AM
So THAT’S why I needed four back-up drives during my last project.